SAWIRRO: Musharrax Cabdikariim Guuleed oo u tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Musharrax Cabdikariim Guuleed oo u tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur
May 13, 2022 Xuseen 8
Musharrax Cabdikariim Xuseen Guuleed, oo kamid ahaa 39 Musharrax oo u taagan Madaxweynaha DFS ayaa ku dhawaaqay in uu u tanaasulay Musharrax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdikariim Guuleed, ayaa wadaaga heyb. Waxaana ay noqon doonaan labadii Musharrax ee ugu horeysay ee isku dhari ah oo ku dhawaaqa inay isku tanaasuleen, si guulo looga gaaro doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Waxaan u mahadcelinayaa walaalkeey C/kariin Xuseen Guuleed oo ii tanaasulay si guul looga keeno tartanka doorashada madaxtinnimada. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye, xildhibaannada, Senatorrada, odoyaasha, siyaasiyiinta iyo ganacsatada hawshaas qaybta ka ahaa.”
Aryaa CC 40 kii kun ma celisay hee..
TANI WAA TANAASUL TOLEED
KKKKK KKKKKKKK KKKKK
Qoorqoor oo dheelaya siyaasad cajiib ah ayaa qorshuhu yahay in codad ka cabdiraxmaan cabdishakuur loo wareejiyo farmaajo si ay habargidir u qaadato raisul wasaaraha
Waar Puntlandtimes,waxaan raqiiska ah waxa lamidka hanoo soo qorin.Waa maxay tanaasul,labo nin oo walaalo ah oo mid feero yaryar yahay, midna feero waawayn yahay laakiin maskax maran ayaa isa sawiray.Waxaa qoys sheekadooda naga daaya.
Kkkk 1 cod miyuu uga tanaasulay?waa 1 cod ee xaaskiisa,ankee Habar-Gidir iyo Hawiye cododkooda ayaan madaxweynaha lagu noqon karin.
Habar-Gidir 12 xillibaan iyo 2 Senator bay leedahay kkkk Somali waa isku sgex yaacday.
Hadaa ma codka Daarood baa Madaxweyne lagu noqdaa ?
Habargidir codkooda Golaha Shacabka waa 12 waxaad ku dartaa Codka Duduble oo ah 4 cod, marka halkaa waxaa Habargidir ku Haysataa waa 16 cod oo Golaha Shacabka ah. Sidoo kale aqalka Sare waxay Habargidir iyo Duduble haystaan 5 cod.
Isku soo wada duub 12+5 = 17 cod.
Majeerteen intaa Mahaystaan.
Inkastoo ay Qalad tahay 4.5 ka sida ay Beelaha wax u qaybsadaan Qaasatan lagu Dulmiyey Beelaha waawayn halka kuwa yar yarka ah Haystaan tiro ka badan kuwa waawayn laakiin waa laga bixi doonaa Nidaamkan qaldan Insha Allah.
Sorry waan qalday xisaabtii
12+4=16 Cod Golaha Shacabka Habargidir and Duduble.
Waxaa kaloo ku Dartaa Aqalka Sare oo ah 5 cod !
Habargidir iyo Duduble waxay haystaan codad dhan labada aqal 21 cod.